PCB Assembly - Telozoro Volamena PCB & Technologies Co., Ltd
Telozoro Volamena PCB & PCB fivoriambe tolotra mitantana ny hazo fijaliana-ary koa Functional dingana tafiditra elektronika famolavolana tolotra, dingana tsara, fitsipika sy azo itokisana ny asa, ny asa sy ny orinasa mpamokatra entana elektronika PCB orinasa mpamokatra entana asa. Afaka mitondra anao amin'ny faritra aina hatramin'ny mba lasa ho antsika, noho ny iray nijanona EMS vahaolana miasa aminao.
Fivoriambe PCB Manufacturing Available PCB Fivoriambe Services Fivoriambe PCB Machines
7 SMT andalana Up ny 12 sosona, jamba izy ka nalevina koa amin'ny alalan'ny, impedance, mavesatra varahina, HDI. Fuji CP8 series SMT mounters
3 hanoboka andalana SMT / hanoboka Auto solder Mametaka efijery pirinty
0201 singa fototra In faritra fitsapana Reflow fatana fandoroana amin'ny faritra 10
0.25mm BGA Asa faritra fitsapana Auto Optical fanaraha-maso
SMT 6 tapitrisa toerana isan'andro Hodorana amin'ny fizahan-toetra Wave soldering (firaka-maimaim-poana)
Hatsoboky 1.5 tapitrisa isan'andro toerana Box Manaova PCB fivoriambe fitiliana ny mpijery
Manana fahaiza-manao goavana for SMT / SMD fiangonana (anisan'izany malefaka ihany koa Natonta Circuit), amin'ny alalan'ny-lavaka sy ny samy hafa ny teknolojia PCB fivoriambe. BGA any amin'ny 0.25mm dity ny fiara, 0201 singa sy ny leadless nametraka fitaovana koa ny fiangonana misy. Hafainganam-pandeha avo lenta Fuji SMT milina afaka manohana tsara ny fepetra hentitra ny PCB fiangonana, na inona na inona mifandray amin'ny Mil-spec, Network, serasera, fikarakarana ara-pahasalamana, ny fitsaboana, zavamaneno fampiharana. Eo amin'ny tahan'ny mandalo, ny tsy nanaovanay 99,9%. Ny injeniera dia hiresaka momba ny ekipa fivoriambe izahay, indray mandeha dingana orinasa mpamokatra entana mahazo ny filaminana. Ny drafitry ny asa tsara indrindra dia ho-kevitra ka ny PCBs dia tanterahina amin'ny kalitao amin'ny aterineto.
Fivoriambe PCB Cost
PCB fivoriambe vidin'ny manana ny fitsipika fomba fikajiana, izay ahitana vidin'ny PCB orinasa mpamokatra entana, singa, SMT / hanoboka fiangonana, fitsapana sy ny fitaovana. Eo amin'ny kely mba nitranga fahiny, injeniera vola no ho voampanga. Manidina na ny endriny fangadiana PCB fitsapana ho an'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny tapaka Stencil 5% fahaverezan'ny singa nandritra ny fivorian'ny biraom-PCB dingana tokony ho voakasika ihany koa. Fa fivorian'ny biraom-PCB fitsapana, dia miankina amin'ny drafitry ny fitsapana sy ny faharetan'ny vita birao iray. Toy Izao,
[Ny mahazatra Calculator ny PCB Antenimieram-Cost]
PCB Assembly Cost = PCB orinasa mpamokatra entana lany + PCB rafitra fitsapana na manidina fangadiana fitsapana saram + PCB injeniera vola (afa-tsy ho an'ny kely nitranga fahiny mba) + Component vidiny (fanampiny 5%) + SMT vahoaka fiampangana + PCB fivoriambe fitsapana lany + Box trano fiampangana + Package vola (fa fampiharana manokana) + Logistics vidiny (nangataka)
PCB famolavolana & FABRICATION dia manampy anao amin'ny famolavolana sy za-draharaha PCB FABRICATION, avo araka ny marina, fanaraha-maso ny kalitao. Amin'ny ankapobeny, ny PCB nitranga fahiny nanompo azo tsara eto amintsika. PCB Fivoriambe dia ahitana ny fisehon'ny, FABRICATION sy ny fivoriana. Isam-bolana koa isika fahaizana ny fanatitra 35.000 metatra toradroa PCB, 80 tapitrisa sy hampiditra hevitra SMT ICT, nanidina fangadiana, Aoi, X-ray, ny asa fitsapana, hodorana-in fitsapana ho dingana fisafoana. Afaka manampy anao amin'ny fanovana rafitra ny harena voajanahary, akora sy ny singa ho vita vokatra izay efa voatolotra mpanjifa ny farany, ary miezaka ny hanana ny tena optimisé famatsiana hanao mahomby sy vidin'ny ambany.
2. Screen fanaovana pirinty Solder Mametaka teo PCB Board
loctite solder pastePhysicochemical sy ny dingana fananan'ny solder apetaho fiantraikany mivantana SMT soldering kalitao. Solder Mametaka pirinty dia azo ampiharina ho an'ny fametrahana vola sahaza solder Mametaka tao PCB fisaka sy mivelatra, mba hahazoana antoka tsara ny fifandraisana eo amin'ny faritra sy ny PCB SMT singa fisaka sy mivelatra ary ny hery mekanika. Solder Mametaka pirinty dia ny fanakianana ny SMT dingana. Endrika Metal pirinty dia conventionally ampiharina hatramin'izao. Araka ny mifandray antontan'isa, 60% ~ 70% toetra olana dia vokatry ny solder pirinty Mametaka amin'ny faritry ny kalitaon'ny antoka ny singa sy ny faritra vita pirinty board. Zavatra takian'ny solder Mametaka fanontam-pirinty:
a. Toerana solder Mametaka araka ny tokony ho, mitovy sy mitovy ny. Solder Mametaka endrika Mazava sy ny namana endriny tsy mifandray. Solder Mametaka endrika ao fanarahana an'i pad, tsy nisy dislocation.
b. Amin'ny ankapobeny, ny tarika faritra solder Mametaka vola tokony 0.8mg / mm2, indrindra 0.5mg / mm2 Fa èty-dity singa.
c. Rehefa avy solder Mametaka fanontam-pirinty, ny endrika tsy misy mavesatra fianjerana sy ny sisiny dia Karakarao tsara. Plate surface Tsy azo atao ho voaloton'ny solder Mametaka.
Misy isan-karazany be dia be samy hafa solder Mametaka firaka hira, granularity sy viscosity na dia ho an'ny rehetra avy amin'ny iray ihany mpanamboatra. Ahoana no mifidy tsara solder Mametaka tena fiantraikany tsara ny vokatra sy ny vidiny. Ary Telozoro Volamena PCB dia mampiasa Loctite solder Mametaka firaka maimaim-poana. Efa-kevitra avy Loctite solder Mametaka azo antoka mba hahazoana antoka tsara ny kalitaon'ny vokatra taorian'ny fitsapana ny dingana injeniera ny printability, demoulding, thixotropy, firaiketan'ny, wettability, welding toerana kilema sy ny sisa.
3. Lead-maimaim-poana PCB Assembly
Amin'ny fanazavana ny olana ara-tontolo iainana sy ny mpanjifa fangatahana, dia afaka manolotra fitarihana-maimaim-poana biraom-PCB fiangonana izay mifanaraka amin'ny fitsipika RoHS. Amin'ny manokana eo ambony, mifidy PCB laminates amin'ny fanarahana RoHS fitsipika ho an'ny orinasa mpamokatra entana PCB. Koa mampiasa hitarika malalaka solder Mametaka sy mifandray reflow / onja fatana fandoroana. Tanteraka isika manatanteraka RoHS takian'ny amin'ny fahazavan'ny fitsipika sy an-toerana tsy te-hanao anao ho any loza tamin'ity fototry io.
4. Nirehitra Program sy In-faritra Test (TIC)
Ny fitsapana dia mijery fohy injeniera faritra, malefaka, amin'izao fotoana izao, famantarana fampitana ny PCB fivoriana zana-kazo araka ny ICT fitsapana drafitra. Ny tatitra matihanina dia hatolotra miakatra ho any aminareo, raha hita fa misy olana. Fa mba batch, dia zana-kazo mamaritra fitsapana manokana hifady hanina ny ICT dingana fitiliana. Tsara ihany koa isika amin'ny decoding be pitsiny sy ny fandoroana fandaharana ho anao. Related toe fitsapana dia haorina mba ho azo antoka ny vokatra miasa tsara araka ny fepetra takiana.
Koa izahay manana voadio fitantanana ny dingana manaraka ny PCB fivoriana.
Incoming fitaovana fitantanana
Etỳ ambonin'ny tendrombohitra teknolojia (SMT)
Amin'ny alalan'ny teknolojia lavaka (THT)
In-faritra fitsapana (TIC)
PCB fivoriambe fitaovana
PCB fivoriambe workflow
Related taratasy fanamarinana
PCB fivoriambe levitra
Mba PCBA fepetra takiana
Fivoriambe PCB Machines
Telozoro Volamena PCB manana 7 mialoha SMT andalana, 3 THT andalana, lamba pirinty, reflow lafaoro, onja soldering, rafitra manadio, BGA rework toerana, rafitra Aoi sy ny fanadiovana. Afaka manohana izay mba batch boky (fitaovana amin'ny kely). Tena zava-dehibe, dia manana traikefa be ny fanatitra vita pirinty fivoriamben'ny faritra birao santionany. Toe-karena sy ny drafitra haingana dia miandry ny famerenana, satria tena maka hitarika ny fotoana sy mijoro amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa. Noho izany amin'ny ankapobeny dia afaka mahazo fivoriambe PCB zana-kazo amin'ny 15 andro (anisan'izany ny fotoam-PCBA orinasa mpamokatra entana, singa fividianana, PCB fiangonana sy ny fitsapana).
Auto Screen Printer ny Solder Mametaka Fuji High Speed ​​SMT Machine Aoi (Auto Optical Inspection)
Ny fanaovana solder Mametaka mandefa teo ny marina PCB pad alalan'ny Stencil amin'ny alalan'ny. Maka toerana singa avy amin'ny niisa teo PCB pad. Nanamarina raha singa ireo ao amin'ny toerana sy ny tari-dalana tsara.
Reflow lafaoro Wave Soldering Izy nitety Test
Soldering ny singa eo amin'ny PCB fisaka sy mivelatra rehefa kivy sy hihena. Soldering ny singa izay tsy azo assemblied ny SMT milina Jereo ny faritra dia conductive.
PCB fivoriambe vola an-Dahatsoratra miankina amin'ny PCB orinasa mpamokatra entana, singa, fitsapana drafitra sy ny filaminana dia be. PCB orinasa mpamokatra entana lany dia mora nokajiana avy ny lafiny, sosona (s), varahina hatevin'ny, laminate hatevin'ny, surface farany sy ny hafa manokana injeniera fangatahana (toy ny mavesatra varahina, impedance, jamba alalan'ny, nalevina alalan'ny sns), fa ny singa vola dia sarotra Voalaza fa manana zana-kazo isan-karazany ny teti-dratsy (mampiasa ICs samy hafa, connector sns).
Mba hahazoana ofisialy Dahatsoratra, azafady mandefa ny antontan-taratasy Gerber, volavolan-dalàna ny fitaovana (Bom) sy ny habetsahany ilaina mba sales@nod-pcba.com. Dia miverina aminao amin'ny raharaham-barotra iray notsongaina tao anatin'ny andro.
Miezaka mafy izahay mba hanolotra tsara indrindra fiangonana PCB tolotra avy any Shina ny Global faritra. Isan-karazany fiangonana PCB olana izay mety tsy ho raikitra ao amin'ny mpamatsy hafa dia ho tapa-kevitra tsara dia tsara ny injeniera amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny ekipa. Izany no mahatonga 100+ mpanjifa tonga akaiky antsika. Manana fahaiza-manao ny fikarakarana Narahi-akora, dingana fanaraha-maso, voadio fitsapana mba hanolotra anao PCB fivoriambe tsara indrindra eo amin'ny lafiny asa kely-to-boky be dia be ny vokatra. Nandritra ny Mazava ho azy fa ny PCB fiangonana, ny injeniera dia tatitra iray, raha ny tatitra DFM kilema PCB mifandray amin'ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana PCB.